Somaliska | Sverige bygger nytt
Macluumaadka mashruuca Sverige Bygger Nytt (Dhismaha Sweden)
Sanadka soo socda, guryo, fooqaq iyo wadooyin badan ayaa la dhisi doonaa Sweden. Markaa shirkado badan ayaa u baahan shaqaalo ay qaataan.
Sverige Bygger Nytt waa mashruuc u fududaynaya dadka ka shaqeeya dhismaha inay helaan shaqo. Mashruucu waxa uu sidoo kale u fududeeyaa shirkaduhu inay helaan shaqaale.
Sverige Bygger Nytt waxa uu doonayaa inuu abuuro qaabab cusub oo shirkada iyo dadka shaqada doonayaa ku kulmaan. Mashruucu waxa uu doonayaa inuu gacan ka gaysto kordhinta tayada iyo kala duwanaanshaha shaqada dhismaha, shirkada guryaha dhisaa iyo kuwa guryaha wax ku rakiba shaqadooda.
Arbetsförmedlingen (adeega shaqada Shacabka Swedish) ayaa leh mashruuca Sverige Bygger Nytt. Mashruuca waxaa maal galiya Deeqda Bulshada Yurub. Deeqda Bulshada Yurub waxay gacan ka gaysataa mashruuca EU dhaxdeeda ee abuura shaqooyinka iyo kuwa gacanta ka gaysta in qof kastaa fursad u helo inuu qayb ka noqdo bulshada.
Mashruuca Sverige Bygger Nytt waxa uu u qaybsan yahay afar qaybood:
1. Arjiga shaqaalaynta
Sverige Bygger Nytt waxay kulamo la yeelataa dadka doonaya inay ka shaqeeyaa dhismaha, shirkada guryaha dhisa ama kuwa qalabka ku rakiba. Inta uu kulanku socdo, dadka dooraya inay helaan shaqooyin waxay ogaanayaan fursadaha jira.
2. Agabka farsamada
Qaab loo yaqaan Agabka farsamada, dadka doonaya inay dalbadaan shaqooyinka waxay isku dayi karaan inay ka shaqeeyaan shaqooyinka dhismaha laba todobaad. Macluumaadka iyo shaqada waxaa lagu salaynayaa aqoonta qofka iyo qofka aqoontiisa Swedish.
3. Tobobarka aqoonsiga ama farsamada gacanta xirfada
Laba todobaad kadib, dadka doonaya inay helaan shaqo waxaa lasiin karaa caawimo hadii loo baahdo. Tusaale ahaan, waxbarasho dheeraad ah, ama caawimada sida shaqada loo raadsado.
4. In la iswaafajiyo tobobarka shaqada ama shaqada iyo xirfada qofka
Dadka shaqada doonayaa waxaa la waafajinayaa xirfadooda baahida shirkada. Shirkada waxay ka helayaan tobobar shaqo ama waxay ka heli karaan shaqo.
Shirkadaha ayaa sidoo kale ka qayb geli kara mashruuca
Shirkaduhu waxay ka qayb gali karaan barnaamijka waxay heli karaan caawimo ah:
• In la iswaafajiyo dadka shaqada doonaya xirfadooda iyo baahida shirkada.
• Inay la socdaan sida dadka shaqada doonayaa ay tahay shaqadoodu.
• In laga caawiyo marka shirkadu doonayso inay shaqaale qaadato dadka ay qaadanayso taas oo mashruuca dhaxdiisa ah.
Qaamuus Ingiriisi iyo Carabi ah
Shirkada Skanska waxay turjuntay kalmadaha caamka ah ee laga isticmaalo marka laga shaqaynayo dhismaha, shirkadaha dhismaha shaqadooda ama shirkada qalabka guryaha ku rakiba. Kalmadaha waxaa lagu turjumay Ingiriisi iyo Carabi..
Riix linkiga si aad u soo dejisato liiska
Ma doonaysaa inaad macluumaad dheeraad ah ka ogaato Sverige Bygger Nytt? Iimeel u dir: sverigebyggernytt@arbetsformedlingen.se